Nzira yekuisa matombo ebira pachigadzirwa? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Nzira yekuisa matombo ebira pachigadzirwa?
Kucheka manhamba, kusanganisira mhuka dzakasiyana siyana dzemavara, dzave dzakakurumbira. Yakawanda inobatsira vhidhiyo tutorials inogona kuwanikwa paYouTube, semuenzaniso, kana iwe ukaisa quot; nhamba kubva gum quot; mubhokisi rekutsvaga. Izvo zvinodikanwa maererano nemirairo yekurasa mabandi easoni, oakanda, nezvimwe. uchishandisa chirauro.
Kutanga kukuru ndiko kuisa imwe yakamonyaniswa rubber pachifuramabwe, ikasave yakamonyaniswa, wozoregedzera kumusoro uye gadzira muswe une chiuno .. Iyi ndiyo nguva yakaoma kwazvo .. Uye ipapo zvese zvakafanana, tarisa kune tenzi tenzi.
Kusuka zviyero zvakagadzirwa nemabhandi enjanji pachifuramabwe zvino zvave mafashoni. Iwe unogona kuwana akasiyana zvachose uye anonakidza maitiro. Kuti utange kutanga kusimuka pachifuramabwe, unofanirwa kutanga watarisa vhidhiyo dzinoverengeka zvidzidzo, hezvino izvo zvinonyanya kunakidza izvo zvichakubatsira iwe kusuka.
Kana iwe uchida chaizvo zvishongo uye zvivezwa zvakagadzirwa nemavara erudzi mabhandi, uye usati wawana muchina unokosha, saka usaora mwoyo - kune nzira yekubuda! Kune zvimwe zvishandiso zvekukweva kubva kumamu, senge chipfuramabwe. Pane pachifuramabwe, izvo zvigadzirwa zvakanaka uye zvinoshamisa zvigadzirwa zvinowanikwa. Hezvino zvishoma zvidzidzo pane kuruka zviyero padanda:
Pane chipfuramabwe, ndainyangana nemachira emachira chete. Kugadzira manhamba, makoramu akawanda anodikanwa. Mifananidzo inogona kurukwa kana isiri pamushini, ipapo pane forogo kana pane monster. Ini ndinoda kupa yakanaka sarudzo yekusuka bhurukwa pachifuramabwe.
Chipfuramabwe bhendi band;; Mapapiro emagineti; Chokwadi, kufadza kunopindirana kwemasuru ebhendi kunopa runako rwemhanza.
2. Bracelet yakagadzirwa nemabhandi enjanji pachifuramabwe Qu; sitroberiquot ;. Iyo bracelet ine zvinhu zvinofanana neyemakwenzi.
Mufananidzo webhanana wakagadzirwa nemabhandi emabhandi pachifuramabwe. Ndichiri kuwana mufananidzo unocheka pachifuramabwe.
Maitiro ekurongedza bracelet pamfoloko uye chigadziko kubva kumashata emarara.
Maitiro ekurongedza bracelet ane zita.
Ndeapi mabasa ekugadzira anogona kugadzirwa kubva kumarara.
Maitiro ekugadzira maruva kubva kune elastic mabhandi.
Ndezvipi zviduku zvingagadzirwa kubva kumabhande emabhora.
Mazuva ano, mumwe maitiro ave kuoneka munguva yedu - ndeyekusuka mabhurukwa kubva kumabhandi enjanji.
Pakutanga, munhu wese aipeta mabhenji paminwe yavo, asi nekufamba kwenguva, michina yakakosha nemasaga zvakatanga kuoneka, izvo zvinoita kuti zvive nyore uye nekuvandudza maitiro ekusuka masongo nezvikwata zveRabara.
Naizvozvo, ini ndinokupa zano kuti utaridze mavhidhiyo mashoma anoratidza zvakajeka kuti sei uye ndapi masongo anogona kuve akarukwa pachifuramabwe:
pane chipfuramabwe hachisi chinhu chakakwanisika kuronga chimwe chinhu, chisarudzo chidiki kwazvo, asi uchiri kukwanisa kuedza. semuenzaniso, unogona kusona Danga reChikero, asi masongo chete ndiwo akavezwa pachifuramabwe, zvinhu zvakawomarara nezvikara; zviri nani kushandisa forogo. rombo rakanaka
Mibvunzo ye60 mu database yakagadzirwa mu 0,277 masekondi.